Shiinaha Nuuradda Dhagaxa Dhagaxa Dahaarka Warshad Mashiinka iyo alaableyda | Kordhi
Burburka daanka waa sumad lagu kalsoon yahay oo lagu kalsoonaan karo oo tayo sare leh iyo wax soo saar wanaagsan. Daanka Burburka kaas oo si ballaaran loo adeegsado si loo burburiyo adkaanta sare, adkaanta bartamaha iyo dhagaxyada jilicsan iyo macdanta sida slag, qalabka dhismaha, marmar, iwm. Awoodda iska caabinta cadaadiska waxay ka hooseysaa 200Mpa, taas oo ku habboon burburka aasaasiga ah. Nooc kasta wuxuu leeyahay furitaan ballaaran oo quudin ah oo ku saabsan cabirkiisa iyo xagal ibta ku habboon, oo siinaya qulqulka maaddooyinka siman, waxtarka hoos u dhaca sarreeya iyo awoodda sare. Naqshadooda fudud waxay qarinaysaa astaamo badan oo horumarsan oo siinaya hawlgal fudud, dayactir fudud, nolol dheer iyo qiimo jaban.
Qalabka daamanka ayaa sida caadiga ah la shaqeyn jiray matoor koronto, sida ku xusan baahida macaamiisha, waxaan sidoo kale ku qalabayn karnaa mashiinka jajabka daamanka leh mashiinka naaftada, wuxuu noqon karaa nooc go'an ama warshad burbura moobiilka.
Ugu badnaan Cabirka quudinta
Mabda'a Shaqada ee Jaw Rock Crusher
Inta lagu guda jiro hawsha shaqada ee burburka dhagaxa jajaban, mootadu waxay wadaa darafta jilicsan si ay ugu rogto qalabka gudbinta. Koorta dhaqaaqaysaa way rogmaysaa oo ku wareegeysaa xoogga shaarka gacanka birta ah, qaybta koorta dhaqaaqeysaa ee ku dhow koonta ma guurtada ahi waxay noqoneysaa godka burburka. Maaddada waxaa lagu jajabiyaa isku xoqid badan iyo saameyn ku yeelashada koorta dhaqaaqda iyo koontaha ma guurtada ah. Marka koorta dhaqaaqeysa ay ka baxdo qaybtaan, walxaha ku burburay cabbirka walxaha loo baahan yahay halkaas wuxuu ku dhacayaa culeyskiisa wuxuuna ka soo baxayaa salka hoose ee koorta.
Gaarsiinta Jaw Rock Crusher
Hore: Mashiinka Mashiinka Xudunta Dhagxaanta Dhagxaanta
Xiga: Gold Copper Ore Stone Ball Mill Shiidi Mashiinka Mashiinka